စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 08/01/2021)
ပြင်သစ်က၎င်း၏ချောကလက်များအတွက်အများဆုံးအလွန်အမင်း rated နိုင်ငံများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်. မြို့တော်၏လမ်းများအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအောင်နေချိန်မှာသင်ကချောကလက်စတိုးဆိုင်များအများကြီးကြည့်ဖို့သေချာ. တကယ်တော့, သင်ကြုံတွေ့ရချောကလက်စတိုးဆိုင်၏နံပါတ်နှင့်အတူလွှမ်းစေခြင်းငှါ. သေချာသင်အကောင်းဆုံးပဲရစ်တွေ့ကြုံခံစားစေရန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်, ကျွန်တော်ပဲရစ်အတွက်မဖြစ်မနေလာရောက်လည်ပတ်ချောကလက်ဆိုင်ဘို့န်းကျင်ကိုမေးမြန်း. အတော်များများကဖြစ်ရှိကြောင်းဖြေကြား Debauve နှင့် Gallais. ဒါကစိတ်ကူးစတိုးဆိုင်သာတမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်တစ်ဦးဂန္ဖြစ်ပါသည်. 1800 ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကလူထုများအတွက်အရသာချောကလက်ဖန်တီးထားပါတယ်. တကယ်တော့, သူတို့ပြင်သစ်တရားရုံးနှင့်နပိုလီယံများအတွက်ချောကလက်ပေးသွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အခါသူတို့ဒါကြီးတွေခဲ့ကြသည်. အတော်များများကအကြီးပြင်သစ်ခေါင်းဆောင်များဟာသူတို့ရဲ့ချောကလက်ပျော်မွေ့, ဒါကြောင့်သင်.
အဆိုပါနယ်သာလန်များသောအားဖြင့်သင်ချောကလက်၏စဉ်းစားသောအခါစိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမနေရာမဟုတ်ပါဘူး. သို့သျောလညျး, ကဆဲဖြစ်ပါသည် အကြီးအရာအရပျ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့ကိုမြည်းစမ်းဖို့. လူကြိုက်အများဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာအမ်စတာဒမ်၌တည်ရှိ၏. Vanroselen ကမ္ဘာ့အဆင့်မီချောကလက်ကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်မည်သူမဆိုအတွက်မဖြစ်မနေလည်ပတ်ရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သူတို့ရဲ့ store မှာအရာအားလုံးကိုလက်ဖြစ်ဖြစ်ပါသည်, ထူးခြားတဲ့နှင့်ပါးစပ်ရေလောင်းရယူထားသောကိုဖန်တီးရန်အမျိုးမျိုးသောအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ချောကလက်ပေါင်းစပ်ပြီး.
သငျသညျသောဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင် သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော နှင့်အရသာ, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ထက်ကိုကြည့်ရှု Erich Hamann အနောက်ဘာလင်. အရာနှစ်ခုကဒီစတိုးဆိုင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေ. ပထမဦးစွာ, ကစတိုးဆိုင်သူ့ဟာသူ၏အံ့သြဖွယ်သမိုင်းပင်ဖြစ်သည်. ဒါဟာနောက်ကျောမှစတငျရ 1928, ထိုသို့ဒုတိယကမ်ဘာစစ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်မယ့် Bauhaus စတိုင်အဆောက်အဦတွင်တည်ရှိသည်. ဒုတိယအ, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာနှင့်အကြီးမြတ်အရသာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်အသရေပင်ဖြစ်သည်. သူတို့ကဆဲစတိုးဆိုင်ကနေမူရင်းစာရွက်မှောင်မိုက်ချောကလက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပြီ. သို့သျောလညျး, သူတို့ပင်အဖြူရောင်ချောကလက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအရသာပူဇော်. သူတို့ရဲ့ချောကလက်အခေါက်မြို့ဟောပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သေချာအောင်ဖို့ကြိုးစားလျှင်သင်ကိုယ်ကျစတိုးဆိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု.
ဒါကြောင့်ချောကလက်အတွက်အနုပညာမှကြွလာသောအခါဘယ်လ်ဂျီယံကိုအကောင်းဆုံးတို့တွင်. ဘယ်လ်ဂျီယံမြို့များမှတဆင့်လျှောက်လှမ်းခြင်း, သငျသညျ display ပေါ်မှာအရသာတဖဲ့တွေအများကြီးမြင်ရပါလိမ့်မည်. စိတ်ကူးချောကလက်သည် get ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်း အဆိုပါချောကလက်လိုင်း Bruges အတွက်. စတိုးဆိုင်ချောကလက်၏ကောင်းတစ်ဦးအပိုင်းအစအတော်ပင်ကြောင့်မည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေအလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်အလာအရသာအများကြီးနဲ့ကနေရှေးခယျြဖို့ပျော်စရာများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲချောကလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်. အဘယ်အရာကိုချောကလက်လိုင်းထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်ချောကလက်အောင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ဟာ bean ကိုထံမှချောကလက်ဖြောင့်ပါစေနှင့်ချောကလက်ကြိတ်နှင့်ရောစပ်မှုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာအထူးပြုပါပြီ. သငျသညျ Bruges အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်များမှာ, အဆိုပါချောကလက်လိုင်းမှာအံ့သြဖွယ်အရသာနှင့်လက်ရာမြောက်သောအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်အချိန်ကိုယူ.
ဟန်ဂေရီ chocoholics များအတွက်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအံ့သြဖွယ်အချိုပွဲအမျိုးမျိုးလုပ်, နှင့်၎င်းတို့၏ချောကလက်ခြွင်းချက်များမှာ. အံ့သြဖွယ်ချောကလက်ပျော်မွေ့ရန်မဖြစ်မနေသွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်ပါသည် ချောကလက် Rozsavolgyi ဘူဒါပက်အတွက်. ဒါဟာချိုမြိန်ရယူထားသောအများကြီးကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အံ့သြဖွယ်ချောကလက်ဖန်တီးမှု. သူတို့ရဲ့ချောကလက်သူတို့ရဲ့ချောကလက် bonbons နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားမှုရရှိ, နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကြိုးစားသောအခါ, ဒါဟာဘာကြောင့်ရှင်းပါတယ်. ငွေရတတ်သောသူ, ရှိအောင်နှစ်သက်တဖဲ့သညျကောငျးကငျများမှာ. သငျသညျလျှင်အားဖြင့် stop ခရီးသွားလာ အဘူဒါပက်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အ/ကအ/ျပီးကြန္ပ်ဴတာမွညိွေ/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.